Chee echiche Dị ka a omee! - Ndị ọkachamara na Semalt na-akọwa Otu esi echebe ebe nrụọrụ weebụ gị
Akụkọ gbasara ebe nrụọrụ weebụ hacking bụ akụkọ niile kwa ụbọchị. Ọtụtụ nde data ejedebena hackers 'aka ndị imebi data, na-ezu ohi ozi ndị ahịa na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa data na-eme ka amata njide mgbe ụfọdụ. Ọ bụka ọtụtụ ndị na-amabeghị otú ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ si eme ka ha nweta kọmputa ha n'enweghị ikike - logo maker creator free download.
Jack Miller, ọkachamara si Ọkachamara ,edepụtara ihe kachasị mkpa banyere hacking ka ị tie ndị ọgụ.
Ọ dị mkpa ịghọta na ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu nkesaịtị karịa ndị mmepe weebụ. Ha na-aghọta nke ọma ụzọ nnyefe nke netwọk nke na-enye ndị ọrụ ikike iziga na nata datasite na sava na arịrịọ.
Ịmepụta ihe omume na weebụsaịtị na-ewebata ihe ndị mkpa nke ndị ọrụ nkechọrọ izipu ma nata data. Ndị omekorita weebụ maara na ndị na-emepe weebụ na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-akwadoịkwụ ụgwọ ngwaahịa mgbe a na-etinye ha n'ahịa ụgbọ ahịa. Mgbe ndị na-emepe weebụ na-ewuli mmemme, ha na-eche banyere ndị ahịa hama ghara iche echiche gbasara egwu nke koodu infiltrations site na ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ.
Olee otú Hackers Ọrụ?
Ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ na-aghọta na saịtị ahụ na-arụ ọrụ site na mmemme na-arịọ makanyocha ma mezuo nkwado tupu usoro nzaghachị zitere nke ọma. Ntinye data ntinye na mmemme ahụ, a na-akpọ ndenye ọjọọnkwenye, bụ isi ihe ọmụma dị n'azụ hacking. Ọ na-eme mgbe data itinye data adabaghị atụmanya dịkakoodu nke onye mmepụta..Obodo nke ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ na-eji ụzọ dị iche iche enye ihe ntinye aka na mmemme tinyere nkeusoro ndị a.
Ihe ntanye edezi
A makwaara dịka nkwekọrịta nkịtị, nhazi ndezi gụnyere ịwakpo data naagafe. Onye ọrụ ma ọ bụ onye nchịkwa weebụ anaghị aghọta agha ahụ n'oge mgbanwe data. Na usoro nke onye ọrụ na-ezigaarịrịọ maka data si onye nchịkwa ahụ, ndị na-agbawa weebụ nwere ike idezi data sitere na onye ọrụ ma ọ bụ ihe nkesa iji nweta ikike ikike n'enweghị ikike. Packetedezi aha ya bụ Man in the Middle Attack.
Mgbe ụfọdụ, ndị na-egwu weebụ na-enweta ohere na PC ọrụ site na ịchekwa obiKoodu na ndị ọrụ atụkwasịrị obi. Usoro obi ọjọọ na-emetụta ndị ọrụ mgbe ana-akpọ ndị iwu n'ime PC ọrụ site na ịpị njikọ ma ọ bụebudatara na faịlụ. Ufodu a na-achikota ebe ndi mmadu na-aga agha bu ihe arumaru na ebe ozo.
Website hackers nwere ike ime otu n'ime ndị kasị agbawa obi hacking site na-awakpo aụlọ ọrụ nkesa agha. Ndị na-agba ọsọ na-achọpụta ihe na-adịghị mfe na ihe nkesa ahụ ma jiri ya na-eme ka usoro ahụ dị egwu na ịrụ ọrụ nchịkwa dị otú ahụdịka ntinye faịlụ. Ha nwere ike ịrụ ọrụ dị ka nsogbu siri ike na-ezu ohi na njikwa ebe nrụọrụ weebụ.
Nchebe Site na Website Hackers
Ndị mmepe weebụsaịtị kwesịrị iche echiche dị ka ndị na-agba ọsọ. Ha kwesịrị iche echiche banyere ụzọ ndị ahụha klas bụ ndị na-adịghị mfe website hackers mgbe na-ewu saịtị. Ndị mmepe ga-emepụta Koodu na-ewepu koodu ntinye site na ịgbapụederede pụrụ iche na mmezi Koodu iji zere ịnweta iwu ndị na-emerụ ahụ site na ndị na-eme nnyocha na weebụ. Ngalaba GET na POST nke mmemmekwesịrị nyochaa mgbe niile.
Firewalls ngwa ngwa weebụ nwere ike hụ nchebe site na mwakpo site na ndị na-eme nnyocha na weebụ.Nchekwa nchekwa ahụ na-echebe koodu mmemme site na ịchekwa ya site na iji aka eme ihe dika ọ na-agọnahụ ohere. A cloud-based firewall application calledCloudric bụ firewall ngwa maka nchebe weebụ zuru oke.